Kanjani lesi sidakamizwa "Valvira"? Izibuyekezo ngalokhu nomuthi kungatholakala izinto sihloko. Futhi, efakwe ohlwini izimpawu ukusetshenziswa zomuthi, imiphumela engemihle, Izimo nokuningi.
Ukwakheka, izidakamizwa iphakeji ezakheke
Ngayiphi ifomu ikhiqizwa lesi sidakamizwa "Valvira"? Izibuyekezo zithi lokhu imithi angathengwa ngesimo okusaqanda amaphilisi ezimhlophe biconvex, ifilimu-camera. Isithako asebenzayo lokhu ejenti izenzo valacyclovir hydrochloride hydrate. izingxenye Njengoba ezengeziwe kubhekwe ukusetshenziswa kwezidakamizwa microcrystalline cellulose futhi povidone.
Ngokuphathelene ifilimu enamathela ke sifaka giproloza, Opadry emhlophe, ama-titanium dioxide, hypromellose futhi Macrogol.
Nomuthi "Valvira", ukubuyekezwa abalwe ngezansi, bayidayise ibhamuza amaphakethe we aluminium ucwecwe futhi PVC, okuyinto ezibekwe amakhadibhodi amabhokisi.
Yini izakhiwo izidakamizwa "Valvira"? Uphenyo odokotela bathi umenzeli namagciwane. Kwake kwathi ngo-umzimba womuntu valaciclovir ngokushesha aguqulwa ukuba L-valine futhi acyclovir. Lokhu kwenzeka ngaphansi kwethonya valatsiklovirgidrolazy.
izidakamizwa Okubukwe liveza umsebenzi othize inhibitory ngokumelene herpes simplex virus, varicella zoster, cytomegalovirus, nokunye. D.
Acyclovir uyakwazi ukubambezela synthesis DNA viral, kanye acyclovir triphosphate iguqulwe ukuze ifomu asebenzayo. Le nto lithathwa DNA viral, okuyinto kamuva kuholela uqhekeko ephelele uchungechunge yayo futhi ivimbela ukufanisana ezibangelwa amagciwane.
Emva kokuthola valacyclovir izidakamizwa angabacwasi ngokushesha ugxile kusukela pheshana emathunjini. A umthamo owodwa we amaphilisi (0.25-2 g) ifinyelela lokuhlushwa esiphezulu egazini ngaphakathi 1-2 amahora. Kanjalo bioavailability zomuthi kuyinto 54%, kungakhathaliseki ukuthi ukudla.
Ukuxhumana acyclovir plasma uphansi futhi cishe 15%. Le into ngokushesha kakhulu sezithunyelwa zonke izicubu. It kungatholakala isibindi, izinso, muscle and wamaphaphu. Acyclovir futhi lingena singene cerebrospinal fluid, uketshezi lwesitho sangasese sowesifazane kanye vesicles herpetic.
Ngo abantu operation evamile ukuqedwa kwezinso isigamu-ukuphila umuthi 3 ihora. Valaciclovir excretion kwenzeka umchamo.
Kungakhathaliseki ukuthi uyazi kuzinjongo ezinqunyiwe zomuthi "Valvira" (amaphilisi)? Izibuyekezo ochwepheshe abanolwazi unolwazi yezinkomba ezilandelayo:
izifo yansukuzonke ye nolwelwesi lwamafinyila kanye isikhumba (nokwelashwa), eyayibonakala ukusebenza okubangwa yileli gciwane herpes simplex (kuhlanganise yansukuzonke esanda kutholakala ukuthi uphethwe i-herpes zangasese);
cytomegalovirus ukutheleleka (prophylaxis), eyaqala ukuvelela phakathi isitho ukufakelwa.
Futhi imithi ibhekwa ezinqunyiwe ukunciphisa ukutheleleka of enempilo zangasese herpes umlingani ngesikhathi ocansini. Nokho, kufanele kuthathwe ngokuthi ukwelashwa suppressive lihambisana namanye amakhambi (amakhondomu m. P.).
Kwezinye izimo, iziguli musa akunikeze imithi "Valvira"? Ukufundiswa libuyekeza odokotela usho Izimo ezilandelayo:
ifomu emtholampilo ezinzima yokutheleleka nge-HIV;
Hypersensitivity ukuze acyclovir, valacyclovir, kanye nezinye izinto izidakamizwa.
Nge imithi kakhulu ngokuqapha elibekelwe abantu hepatic (ikakhulukazi imithamo ephezulu), ukwehluleka kwezinso, lapho ekhulelwa noma ngesikhathi sokuncelisa ibele.
Izidakamizwa "Valvira": yokusetshenziswa
Izibuyekezo ngalokhu nomuthi kuzoxoxwa ngezansi.
kufanele Ngithatha kanjani amaphilisi namagciwane? Imithi enqunyiwe abadala ngaphakathi. Umthamo lincike ohlotsheni nobukhali sifo.
Amashingili - 1000 MG kathathu ngosuku ngesonto.
Herpes simplex - 500 mg kabili ngelanga. Lapho lokubuya kwesifo izinga ingahlala izinsuku 3-5, futhi isiqephu sokuqala - kufikela kuzinsuku ezingu-10.
herpes Labial - 2 g izikhathi 2 ngosuku. Umthamo yesibili kufanele kamuva, kwathathwa amanye amahora angu-12.
Ukuvimbela ukutheleleka yansukuzonke, okwakubekelwa okubangelwa herpes simplex virus kubantu abanegciwane evamile omzimba - 500 mg kanye ngelanga, nge recurrences njalo - 250 mg kabili nsuku zonke abadala nge ukuntula mzimba - 500 mg kabili ngelanga. Isikhathi yokuyelapha izinyanga 5-12.
Ukuvimbela cytomegalovirus ukutheleleka intsha esikhulakhulile abangaphezu kweminyaka engu-abadala nambili - amabili amagremu kane ngosuku. Isikhathi kwelashwa izinyanga ezintathu.
Njengoba for the nokuvinjelwa isifo uzakwethu enempilo ukuthatha izidakamizwa "Valvira" (1500) I-herpes? ochwepheshe lezivakashi bathi abantu immunocompetent futhi uyahluleka uma elwa nokuphuza njalo imithi iphathwe imali mg 500 kanye usuku lumelele unyaka. Lapho izenzo zocansi njalo imithi kufanele waqala ngezinsuku ezintathu.
Dose kumele kungancipha in iziguli kahle izinso umsebenzi.
Amacala ukweqisa izidakamizwa amaphilisi
Yiziphi izimpawu zenzeka lapho okungalungile izidakamizwa eyanele "Valvira"? Izibuyekezo lodokotela ukhombise izimpawu ezilandelayo ukweqisa izidakamizwa: isicanucanu, ukudideka, ukuhlanza, ukwehluleka kwezinso, ikhanda elibuhlungu, ukwanda serum creatinine lokuhlushwa, ukuhhema, ukuquleka, ukuyaluza, equlekile.
Izisulu kufanele kube ngaphansi kweso lwezokwelapha njalo ukuthola imiphumela anobuthi izimpawu.
Hemodialysis likuvumela ukuthi ususe ngokuphelele acyclovir kusukela egazini.
Yini ohlangothini ukusabela kungenzeka seziguli ezithola "Valvira" ukulungiselela (500 mg). Izibuyekezo iziguli avame ukukhuluma ka nalawo mathonya engathandeki, njengokucanuzela kwenhliziyo kanye bekhanda. Futhi kubhekwe izidakamizwa futhi kungabangela zazinzima kakhulu ohlangothini ukusabela ezifana thrombotic purpura thrombocytopenic, ukwehluleka oyingozi so-renal, hemolytic-uremic syndrome neziyaluyalu zezinzwa.
Ngaphezu okungenhla, ochwepheshe bathi, futhi imiphumela elandelayo enqabayo:
ukuyaluza, isiyezi, ukuyaluza, ukucindezeleka, ukudideka, izimpawu zengqondo, ukuhhema, encephalopathy, ukulahlekelwa yingqondo, dysarthria;
ukuqubuka, photosensitivity, pruritus;
neutropenia, vasculitis leykoplastichesky, anaemia aplastic, purpura thrombocytopenic, thrombotic;
zokuphefumula ipheshana izifo, dysmenorrhea, tachycardia, arthralgia, ukukhathala, nasopharyngitis, ukuntuleka kwamanzi emzimbeni, ukuvuvukala ebusweni, imfiva, kukhuphuke blood pressure, rhinorrhea.
izincomo Specific ku reception "Valvira" izidakamizwa (indlela ukuthatha: ngaphambi kokudla noma ngemva kokudla)?
Uphenyo odokotela bathi le bioavailability zomuthi izimele ukudla. Ngakho-ke, lingase lithathwe kokubili ngesikhathi sakusihlwa futhi emva. Into esemqoka - ukuze bagcine Isikhala elilinganayo phakathi umthamo nsuku zonke.
Kufanele kuphawulwe ukuthi asebekhulile Isikali ukulungiswa kungadingeki, ngaphandle ezimweni lapho kukhona ukushayisana okuphawulekayo izinso.
isipiliyoni Clinical ne izidakamizwa ezinganeni ezincane sishoda. Ngakho-ke, ukuze ukwabela izingane ezinjalo izidakamizwa abaneminyaka engaphansi 12-14 is hhayi Kunconywa.
I-Herpes - igciwane ekukhathaza abantu abaningi emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, "Valvira" umuthi bayindlala kakhulu emakethe ezithaka imithi. Ngokusho izimpendulo iziguli, lo muthi ikhuthaza ukuqedwa okusheshayo herpes izilonda, kanye ngcono nesineke inhlalakahle.
"Valvira" lisetshenziswa hhayi kuphela ukwelapha igciwane wathi, kodwa futhi njengoba isilinganiso izifo. Abantu abaningi bathi uma nithatha le imithi ukuvama okuvela herpes is kakhulu ziyancipha.
Asinakusho ukuthi uma yonke imithetho ngokuthatha imithi, ke cishe never akakubangeli engemihle. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi kanye okubuyayo kusukela kule izidakamizwa futhi okungekuhle. Iningi lazo zihlobene izindleko aphezulu izidakamizwa. Okwamanje, amaphilisi eziyishumi (500 mg) "Valvira" angathengwa ruble 600-680.
Wamafutha tetracycline. Yokusetshenziswa
Umuthi 'Mydocalm "kanye notshwala: Oluvumelana
Kuyini biozavivka izinwele? curls Big futhi izinwele bushelelezi - ukhetha!